Beylow inta gabadhu kastay miyaad garan weysay? | KEYDMEDIA ENGLISH
MUQDISHO, Soomaaliya - [Dhigaal] Golaha Wasiirrada Soomaaliya ayaa shalay ka laabtay go’aankii ay Xukuumaddii Xasan Cali Kheyre 2017, ONLF ugu aqoonsatay urur argagixisio, isla-markaana ay ku xalaaleysay gabood-falkii lagula kacay Cabdikariin Muuse Qalbi-dhagax oo waqtigaas loo dhiibay dowladda Itoobiya.
Xukuumadda Maxamed Xuseen Rooble, waxa ay wax kama jiraan ka soo qaadday, go’aanii Xukuumaddii ka horreysay, waxayna raalli galin buuxda u dirtay Cabdikariin Muuse Qalbi-dhagax, halka ay khalad cad ku tilmaantay in ONLF, loogu yeero Argagixiso.
Haddaba waxaa jirta arrin Soomaalida oo dhan ka yaabisay, taas oo ah in kaliya hal Wasiir uu diiday maalintii Farmaajo iyo Khayre liiska Argagixisada ku darayareen ONLF, isla-sidaas oo kale, uu hal Wasiir diiday shalay in Ururka laga saaro liiska qaldan ee la galiyay.
Sida diiwaanka ku dhigan, Wasiirkii hore ee Gargaarka iyo Maareynta Musiibooyinka, Maamo Maryam Qaasim Axmed, ayaa ahayd halka Wasiir ee maalintii lagu darayay liiska argagixisada ONLF, si cad kulankii Golaha Wasiirrada ee Kheyre shir guddoominayay ka sheegtay in go’aankaas uu yahay khalad loona baahan yahay in laga fiirsado.
Sugnaanshahaas iyo mowqifkaas taariikhiga ah, Maryan Qaasim, waxa ay ku weysay xilkii ay heysay, kadib markii uu RW Kheyre go’aansaday in Wasaaradda Gargaarka iyo Maareynta Musiibooyinka, uu isagu toos u maamulo, maadaama Maamo Maryan diidday taageeridda qaraar isagu soo gudbiyay.
Tallaabadaas, uu Kheyre xaafiiskiisa ku hoos geeyay howlaha Wasaaradda, ayaa sii socday ilaa uu maalmo kadib dhacay qarixii 14-kii October 2017, kaas oo halkii ay gurmadka dadka masuul uga noqon lahayd Xukumadda, Wasaaradda Gargaarka uu Kheyre magacaabay guddi gargaar oo isaga hoos taga.
Guddigaas wuxuu si laga xishoodo u musuqay deeqo gudaha iyo dibadba ka yimid oo dhibanayaasha logu tala galay in lagu caawiyo, waxayna taasi sababtay in Maryan Qaasim, isaga tagto xilka ay heysay isla-sanadkii koobaad ee maamulkii Farmaajo.
Taas baddelkeeda, Wasiirka Wasaaradda Maaliyadda Soomaaliya, Cabdiraxmaan Ducaale Bayle, ayaa shalay noqday kaliya halka Wasiir ee diiday in laga laabto go’aankii Xukuumaddii Kheyre, wuxuuna isku dayay inuu hor istaago in ONLF, laga saaro liiska khaldan ee la galiyay.
Inkastoo muuqaal kooban oo uu soo duubay saacado kadib go’aankii soo baxay shalay, uu ku beeniyaya jiritaanka arrinkaas, haddana xubno ka tirsan Golaha Wasiirrada oo kulanka fadhiyay ayaa Keydmedia Online u sheegay in Bayle, si cad u diiday in la buriyo go’aankii hore ee saaxiibadiis Kheyre iyo Farmaajo masuulka ka ahaayeen.
Xildhibaan Mahad Maxamed Salaad oo ka mid ah shaqsiyaadka ugu xog ogaalsan baarlamaankii 10-aad, ayaa bartiisa gaarka ah, ku soo qoray; “Beyle ilee ma xishoodo. Wuxuu ahaa wasiirka keliya ee ka horyimid go’aankii Golaha Wasiirada maanta gaareen. Muxuu isaga adkeysan waayay diidmadiisii hore, maxaa ku qasbaya in uu LIVE soo galo!”.
Bayle, oo ugu horreeya shaqsiyaadka muddada dheer caruurta ka korsanayay canshuurta reer Muqdisho, ayaa caan ku ah sheegashada wadanidda beenta ah, oo ah qodob uu la wadaago, koox uu hoggaamiyo Farmaajo, oo Zakariye Xaaji Cabdi iyo xubno kale qeyb ka yihiin.
Bayle, ma garan-weyn inta Maryan garatay, 2017, wuxuu ka mid ahaa xubnihii gacanta dheer u taagay in ONLF, lagu daro liiska Argagixisada, shalayna wuxuu diiday kharaarkii uu RW Rooble, hor geeyay Golaha Wasiirrada si looga looboto go’aankii hore. Aaway wadaniyaddii uu sheegan jiray?
Sheegashada wadanidda ee shaqsiyaadkaan iyo Soomaali jeceylka aan afka baarkiisa dhaafsaneyn oo ay waligood ku tookhi jireen ayaa si guud u fashintay, bulshada ayaana si weyn u baratay shanti sano ee la soo dhaafay, kooxdan is-qiireynta caanka ku ah.